हावाहुरीमा घाइते ११ जनाको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुँदै, २ को अवस्था गम्भीर, मृतक २७ मा ५ बालबालिका – Health Post Nepal
हावाहुरीमा घाइते ११ जनाको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुँदै, २ को अवस्था गम्भीर, मृतक २७ मा ५ बालबालिका
२०७५ चैत १८ गते १२:४७
आइतबार सँझको हावाहुरी र भुमरीबाट बारा र पर्सा जिल्लामा गम्भीर घाइते भएका ११ जनालाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ । उनीहरुको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार सुरु भएको अस्पतालले जनाएको छ । दुईजनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ । घाइतेलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मृतकको संख्या २७ पुगेको छ । गृह मन्त्रालयको सोमबार मध्याह्न १२ बजेको रिपोर्टअनुसार बारामा ५ बालबालिकासहित २६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । ज्यान गुमाउनेमा ११ पुरुष र १० महिला छन् । त्यसैगरी, पर्सामा एक पुरुषले ज्यान गुमाएको गृहले जनाएको छ । ४ सयजनाको हाराहारीमा घाइतेको देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने करिब ३ सयजना उपचारपछि घर फर्किसकेको जनाकारी प्राप्त भएको छ । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा सबैभन्दा बढी घाइतेको उपचार भइरहेको छ ।
नारायणीमा १ सय ६८ जनाको उपचार भइरहेको अस्पतालका रमेश चौधरीले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा १००, गण्डक अस्पताल वीरगन्जमा २८, वीरगन्ज हेल्थ केयर ३९, एडभान्स अस्पताल वीरगन्जमा २०, कलैया अस्पतालमा ३८ र तराई अस्पताल वीरगन्जमा २ जनाको उपचार भइरहेको छ। उप्रप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे, स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देहक डा. गुणराज लोहनी प्रभावित जिल्ला पुगिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
घाइतेको उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक टोली प्रभावित स्थलमा
मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले चितवन तथा जनकपुरबाट मेडिकल टोली घटनास्थलमा पठाएको बताए । काठमाडौंबाट डा. रमेश खरेलको नेतृत्वको टोली घटनास्थलमा हिँडेको र आवश्यक परे अर्को टोली पठाउने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केन्द्रीय औषधि स्टोर पतलैयामा रहेकाले त्यहीँबाट औषधि वितरण भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जनाकारी दिए ।
सहयोगका लागि अपिल, उद्धारमा तीव्रता
अचानकको हावाहुरीको वितण्डाका कारण बिचल्लीमा परेका बरा र पर्सावासीको सहयोगका लागि केन्द्र सरकार र प्रदेश २ सरकारले पनि सबैमा आह्वान गरेका छन् । सरकारसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य राजनीतिक दलहरु, विद्यार्थी संगठनहरु, सामाजिक संघ–संस्थाहरुलगायतले पीडितको सहयोगका लागि अपिल गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई उद्धार र राहतमा प्रत्यक्ष खटिन निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्वनिर्धारित गृहजिल्लाको कार्यक्रम स्थगित गरेर क्षतिग्रस्तक्षेत्रको निरीक्षणमा पुगिसकेका छन् ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरुलाई उद्धार र राहतका लागि खटाएका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका टोलीले क्षतिग्रस्तक्षेत्रमा उद्धारको कामलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । सिकिस्त बिरामीलाई हेलिकोप्टरमार्फत अस्पताल पुर्याउने क्रम जारी छ । गृह मन्त्रालयले पीडितको उद्धार र राहतमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने जनाउँदै जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ ।
हावाहुरीले गराएको दुर्घटनामा एकैसाथ ठूलो संख्यामा घाइते भएका कारण रगतको अभाव हुन थालेपछि देशभर विभिन्न विद्यार्थी संगठन तथा संघसंस्थाहरुले रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी घाइतेको उपचारमा सहयोग गरिरहेका छन् ।